Kedu ihe bụ ikuku ma gịnị kpatara o ji dị mkpa? | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedu ihe bụ ikuku ma gịnị kpatara o ji dị mkpa?
Na ụwa anyị, anyị nwere ike ịlanarị ekele site na ngwakọta nke gas dị iche iche nke gbara ụwa dum gburugburu. Akwa a na-anọgide na ụwa n'ihi ike ndọda. O bu maka ikuku uwa na ya ọkpụrụkpụ bụ ike ikpebi kpọmkwem, ebe ọ bụ na gas na-ede ya na-erughị ok na elu, ruo mgbe fọrọ nke nta ka ọ ga-efu narị kilomita ole na ole site n'elu.
Igwe na-arụ ọrụ dị iche iche maka ndụ na mbara ala ma ọ bụrụ na ọ bụghị ya anyị agaghị enwe ike ndụ ka anyị si mara ya. You chọrọ ịma ihe niile gbasara ikuku?
1 Ngwakọta nke ikuku
2 N'ígwé nke ikuku
3 Gịnị mere ikuku ji dị mkpa?
4 Omume mmadụ na ikuku
Ngwakọta nke ikuku
Ikuku ahụ bụ ngwakọta gas, ọtụtụ n’ime ha na-etinye uche na ihe a na-akpọ homosphere, nke sitere na ala ruo 80-100 kilomita elu. N'ezie oyi akwa a nwere 99,9% nke ngụkọta oke ikuku.
N'ime gas ndị mejupụtara ikuku, Ekwesiri igosi nitrogen (N2), Oxygen (O2), Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2) na vepo mmiri. Ọ dị mkpa ịmara na ntinye gas ndị a dịgasị iche na ịdị elu, a na-akpọkarị ọdịiche dị na mmiri mmiri, nke na-etinye uche karịsịa na akwa dị nso na elu.
Ọnụnọ nke gas nke mejupụtara ikuku dị mkpa maka mmepe nke ndụ n'ụwa. N'otu aka, O2 na CO2 kwere ka arụ ọrụ dị mkpa nke anụmanụ na osisi, na nke ọzọ, ọnụnọ nke alụlụ mmiri na CO2, na-ekwe ka ọnọdụ okpomọkụ dị n'ụwa ga-ezu oke maka ịdị adị nke ndụ niile. Alụlụụ mmiri na CO2, yana gas ndị ọzọ pere mpe dị ka methane ma ọ bụ ozone, bụ ihe a na-akpọ griin haus. Mgbaze nke anyanwụ nwere ike ịgafe gas ndị a na-enweghị nsogbu, mana radieshon nke Earthwa na-ewepụta (mgbe ọ na-ekpo ọkụ na ike anyanwụ) bụ akụkụ nke ha, na-enweghị ike ịgbaba na mbara igwe n'ozuzu ya. N'ihi ịdị adị nke griin haus mmetụta, anyị nwere ike ibi na anụ siri ike. Ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi ọnụnọ gas ndị a na-ejigide okpomọkụ ma mepụta mmetụta a, Ọnọdụ okpomọkụ ụwa ga-adị n'okpuru -15 ogo. Cheedị n'echiche okpomọkụ ahụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile, ndụ n'ụwa dịka anyị maara na ọ gaghị ekwe omume.
Na ikuku, njupụta, mejupụtara na ọnọdụ okpomọkụ nke ikuku dịgasị iche na elu.
N'ígwé nke ikuku
A na-eke ikuku ahụ n'ọtụtụ akwa dị ka nhazi ya, njupụta na ọnọdụ okpomọkụ. Nke a bụ nchịkọta dị mkpirikpi nke oyi akwa nke ikuku.
Ebe anakpo: Ọ bụ akwa dị larịị, nke ndụ na ọtụtụ ihe omimi ihu igwe na-etolite. Ọ gbatịpụrụ ruo ihe dịka kilomita 10 n’osisi ndị ahụ na kilomita 18 na ekwuru. Na troposphere, ọnọdụ okpomọkụ na-agbada nke nta nke nta na ịdị elu ruo mgbe ọ ruru -70º C. Njedebe nke elu ya bụ tropopause.
Osimiri: Na oyi akwa a, ọnọdụ okpomọkụ na-abawanye ruo na ihe ruru -10ºC n'ihe dị ka kilomita 50 nke elu. Ọ bụ na oyi akwa a ebe oke ozone dị, "ozone oyi akwa", gas nke site na ịmịkọrọ akụkụ nke ultraviolet na radieshon infrared sitere na Sun na-enye ohere ịdị adị nke ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka ndụ n'elu ụwa. A na-akpọ elu nke oyi akwa a stratopause.
Ahịa: N'ime ya, ọnọdụ okpomọkụ na-agbadata ọzọ na ịdị elu -140 .C. O ruru elu nke kilomita 80, na njedebe nke ya bụ mesopause.
Okirikiri: Ọ bụ oyi akwa ikpeazụ, nke gbatịrị ruo ọtụtụ narị kilomita nke ịdị elu, na-eweta okpomọkụ na-abawanye ruo 1000 ºC. Lee gas dị oke ala ma na-eme ka ọ dị mma.
Gịnị mere ikuku ji dị mkpa?
Ikuku anyi di nkpa maka otutu ihe. Karịa ihe dị mkpa, anyị kwesịrị ịsị na ọ dị mkpa. N'ihi ikuku, ndụ nwere ike itolite na mbara ụwa anyị, ebe ọ na-amịkọrọ akụkụ buru ibu nke radieshịọn ultraviolet sitere na anyanwụ na oyi akwa ozone. Ọ bụrụ na meteor abanye na orbit na ụwa ma na-aga iti anyị ihe, ikuku bụ ọrụ maka ịghasa ha n'ime ntụ n'ihi esemokwu ha na-ata mgbe ha na-akpọtụrụ ikuku. Na-enweghị ikuku, ọsọ nkukota nke ihe ndị a ga-abụ nchikota nke ohere nke onwe ha (nke sitere na ụwa anyị) tinyere ngwangwa nke gravitation causedwa kpatara, ya mere ọ dị ezigbo mkpa inwe ya.
Ihe ọzọkwa ekwuru bụ eziokwu bụ na mbara ụwa enwebeghị otu ihe ahụ. Kemgbe ọtụtụ nde afọ, ihe ndị mejupụtara ikuku na-agbanwe ma na-emepụta ụdị ndụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ikuku ikuku na-enweghị obere oxygen, ọ bụ methane gas nke chịkọbara ihu igwe na ndu nke diri bu nke methanogens. Mgbe ọdịdị nke cyanobacteria pụtara, ọnụọgụ oxygen dị na mbara igwe mụbara ma mee ka ụdị ndụ dị iche iche kwe omume dị ka osisi, anụmanụ na ụmụ mmadụ.
Ọrụ ọzọ dị mkpa nke ikuku bụ magnetosphere. Nke a bụ mpaghara nke ikuku hụrụ na mpụta mpaghara ụwa na na-echebe anyị site na ịgbanyụ ikuku nke anyanwụ nke radieshon electromagnetic na-ebu. Ọ bụ ekele na ndọta nke ụwa na-adịghị eri anyị site na oké ifufe.
Ikuku nwere ezigbo mkpa na mmepe nke usoro biogeochemical. Ihe mejuputara ikuku ugbua bu site na photosynthesis nke osisi na aru. Ọ bụkwa nke na-achịkwa ihu igwe na gburugburu ebe mmadụ nọ bi na ya (na troposphere), na-ewepụta ihe omimi nke ihu igwe dịka mmiri ozuzo (nke anyị si enweta mmiri) na ịnwe oke mkpa nke nitrogen, carbon na oxygen.
Omume mmadụ na ikuku
O di nwute, mmadụ na-eme mgbanwe na ngwakọta nke ikuku. N'ihi ọrụ ụlọ ọrụ, anwuru ikuku gas dị ka carbon dioxide na methane na ikuku nke nitrogen oxides nke na-akpata mmiri ozuzo acid na-abawanye.
Increasega n'ihu na-abawanye na ikuku gas a na-akpata okpomọkụ gburugburu ụwa. Ogologo okpomọkụ na mpaghara niile nke ụwa na-abawanye, na-eme ka njigide nke usoro okike niile dị. Nke a na - ebute mgbanwe ihu igwe nke butere na mgbanwe nke usoro ihu igwe. Dịka ọmụmaatụ, mgbanwe ihu igwe na-abawanye ugboro na ike nke ihe omume ihu igwe dị oke egwu dịka oke ifufe, oke mmiri, idei mmiri, ụkọ mmiri, wdg. A na-agbanwe usoro ihe ndị dị ka El Niño na La Niña, ọtụtụ ụdị na-agagharị ma ọ bụ na-anwụ n'ihi mgbanwe nke ebe obibi ha, ice nke okpu polar na-agbaze na ịrị elu nke oke osimiri. , wdg.
Ka i si hụ, ikuku dị oke mkpa na ndụ ụwa anyịỌ bụ ya mere anyị ga-eji buso mgbanwe ihu igwe agha ma hụ na ikuku gas na-eme ka ebe obibi dị ka ọ dị n'oge gara aga, tupu mgbanwe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Kedu ihe bụ ikuku ma gịnị kpatara o ji dị mkpa?
Enwere m mmasị na nkọwa banyere mgbanwe dị iche iche na mbara igwe
Ha na genetically gbanwee ehi ka ha nwee ike iguzogide okpomoku uwa